9- Saxiix Oo La Dhamaystiri Karo Inta Ka Dhiman Suuqa Kala iibsiga January %
By Ramzi Yare	 On Jan 28, 2020
Dhamaadka suuqa January ayaa ka haray muddo 4 maalmood ah iyada oo koox walba u dadaalayso sidii ay u dhamaystiri lahayd saxiixyada xiddigaha ay doonayaan si ay ugu xoojiyaan kooxdooda ka hor inta uuna xidhmin suuqa January.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 9-ka saxiix ee laga yaabo in la dhamaystiro ka hor inta aanu xidhmin suuqa Jnauary ee bishan:
Mykola Matviyenko- Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa saxiixa xiddiga Mykola Matviyenko kaas oo uu Arteta u doonayo in uu ku xoojiyo khadka dhexe ee daafaca xilli uu doonayo in uu kooxda ku hogaamiyo u soo bixista tartanka champions League.
Moussa Dembele -Chelsea
Chelsea doonaysa weeraryayan cusub kadib markii uu Lampard si cad u qirtay in uu u baahanyahay xiddig gool dhaliye dilaa ah oo dhamaystira fursadaha ay hesho xiddigaha kooxdiisa waxana ay Chelsea xiiso u muujisay saxiixa xiddiga Lyon ee Moussa Dembele kaas oo ay xitaa wadahadalo kula jiraan.
Krzysztof Piatek – Tottenham
Jose Mourinho iyo kooxdiisa ayaa suuqa ugu jira weeraryahan cusub kadib dhaawacii soo gaadhay kabtankiisa Harry Kane waxana uu raadinayaa sidii uu u keeni lahaa weeraryahan cusub waxana uu calaamadsaday weerarahanka Krzysztof Piatek
Olivier Giroud – Inter Milan:
Tababaraha kooxda chelsea ee Frank Lampard ayaa qirtay in uu uu Giroud wadahadalo kula jiro kooxda Inter Milan waliba heshiiska shaqsiga ah la gaadhay kooxda reer Italy.
Giroud ayaa baxsad ka ah kooxda Lampard kadib markii uu boos joogto ah ka waayay xilli ciyaareedkan waxana ay Blues ku iibianysaa xiddiga lacag dhan 5 milyan oo euro.
Christian Eriksen -Inter Milan
Xiddiga reer Denmark ayaa ku sugan Italy isaga oo tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Inter Milan iyada oo laga yaabo in lagu dhawaaqo saxiixa maalinta bari ah isaga oo ugu dambayn dhamaystiri doona heshiiska uu kaga tagayo kooxda Man United.
Bruno Fernanades- Man United
Xiddiga reer Portugal ayaa si weyn loola xidhiidhinayay kooxda Man United waxana ay United ka gudbisay dalabyo Rasmi ah oo ay ku doonayaan xiddiga khadka dhexe.
Inkasta oo ay haatan Man United ku dhibaatoonayso dhamaystirka saxiixa hadana Red Devils ayaa ku kalsoon in ay heli doonto saxiixa xiddiga ka hor inta uuna xidhmin suuqa January.
Boubakary Soumare- Chelsea
Xiddigan ayaa lala xidhiidhinayaa kooxda chelsea waana xiddig January oo dhan lala xidhiidhinayay Premier League waxana ay Chelsea doonaysaa in ay ku xoojiso khadka dhexe inkasta oo ay Blues tartan adag kala kulmayso saxiixiisa.
Islam Slimani -Man United
Man United ayaa suuqa ka raadinaysa weeraryahan kadib dhaawacii soo gaadhay Marcus Rashford waxana ay si lama filaan ah xiiso ugu muujiyeen xiddiga Islam Slimani kaas oo amaah ugu jooga kooxda Monaco kana maqan kooxda premier League ee Leicester City.
Edison Cavani – Atletico Madrid
Xiddiga reer Uruguay ayaa lala xidhiidhinayaa kooxaha Chelsea, Man United iyo Atletico Madrid kuwaas oo doonaya saxiixa xiddiga si ay u helaan inta lagu jiro bishan.
Heshiiska Cavani ayaa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedkan laakiin PSG ayaa doonaysa in ay kaliya ku iibiso xiddga hadii ay hesho lacag dhan 25 milyan oo euro.
Arsenal ayaa iska xaadirisay waregega 5-aad ee FA Cup-kadib guul ka gaartay AFC Bournemouth